Mụkwuo Peeji nke ọ bụla na nleta ma belata mbata ọnụego | Martech Zone
Odi ka otutu ulo oru m na aru oru were nwere mgbe ha na-elele peeji nke obia ma welata onu ahia. Ebe ọ bụ na ọ bụ usoro ihe ama ama, ahụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ ka ha tinye ihe mgbaru ọsọ maka ndị ndu ha n'ịntanetị mma ha. Anaghị m adụ ya ọdụ na anaghị m eche na ọnụego m karịrị iri asatọ.
Ikekwe mmeghachi omume na-atọ ọchị na nke a bụ ihe m hụrụ bụ ndị na-agbaji ibe ha ma ọ bụ na ntanetị ka ndị mmadụ wee pịa njikọ iji gaa n'ihu na peeji na-esonụ iji mezue ịgụ isiokwu ahụ. Nke a bụkwa ọsọ na saịtị na-akwụ ụgwọ site na mgbasa ozi…. more pageviews nwere ike hà ọzọ revenue na ndị ọzọ na mgbasa ozi idowe.
O doro anya na ibe ọ bụla na-eleta na-abawanye na ọnụego bounce na-ebelata - echekwala na ntụgharị na-adakwa, agbanyeghị, n'ihi na ndị na-agụ akwụkwọ na-ewe iwe na ha enweghị ike iru ọdịnaya ha na-achọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iwulite peeji ọ bụla kwa nleta ma belata ọnụego ibiaghachi, aga m akwado ihe ndị a:
Mee ka ibe gị dị mfe ọgụgụ! Dee pithy, ọdịnaya na-akpali akpali nke na-eji isi, isiokwu nta, ndepụta ndị edeturu, ndepụta ndị a gụrụ agụ, na okwu ndị nwere obi ike n'ụzọ dị irè. Nke a ga - enyere ndị mmadụ aka igwu post gị ọfụma ma kpebie ma ha ga - achọ ịbanye ọzọ. Data na ibe ederede buru ibu bu uzo kwesiri ntukwasi obi iji mee ka ndi mmadu biaghachi.
Nye ndị ọbịa gị ihe ndị ọzọ! Banye ọdịnaya gị na ọdịnaya metụtara. Site n’inye ọdịnaya, peeji nke, ma ọ bụ ịkpọ oku na omume gị yana ọdịnaya gị, ị na-enye ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ maka onye na - agụ akwụkwọ gị karịa ịnwe ha kwusi kpamkpam. Maka WordPress, M na-eji WordPress mgbakwunye Posts ngwa mgbakwunye. Ọ bụ eziokwu.
Onwe m, ekwenyere m na ọnụego ibiaghachi na ibe maka nleta bụ ụzọ dị egwu maka azụmaahịa iji chọpụta ọganiihu ahịa ha n'ịntanetị. Ọ gwụla ma ịnwere ike ịnye ụdị mmekọrịta dị n'etiti mgbanwe na mkparịta ụka na peeji nke, gịnị kpatara ị ga-eji eche ma ọ bụrụ na ndị mmadụ hụrụ saịtị gị wee kwalite? Ma eleghị anya, ha abụghị ndị ọbịa ziri ezi? Ikekwe, saịtị gị meriri nsonaazụ ọchụchọ dị elu maka isiokwu na-adịghị mkpa. You na-aga ntaramahụhụ gị ahịa otu maka na?
Dịka azụmahịa, ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blọọgụ gị kwesịrị ịnya nduzi ọhụrụ, na-enyere aka ijide ndị ahịa ugbu a, ma ọ bụ nyere aka ịmepụta ikike maka gị na ụlọ ọrụ gị (nke na-eduzi ọhụụ ọhụrụ ma na-enyere aka idowe ndị ahịa). Ntughari kwesịrị ịbụ metric gị! Ọ bụghị Peeji nke ọ bụla gaa ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ọnụego. Obi dị m ụtọ ma ọ bụrụ na ndị ahịa m rutere na saịtị m, chọta ụdị kọntaktị ahụ, ma bilie!
PS: Ọ bụrụ na ị bụ akwụkwọ weebụ yana ego gị si na mgbasa ozi enweta, ị nwere ike ichegbu onwe gị gbasara ọnụego ibiaghachi na ibe maka nleta maka ya. eme mezie nnweta ego saịtị gị. Ana m ekwu maka ụlọ ọrụ na saịtị ha.
Tags: ibiaghachi udumụbaa peeji ọ bụla na nletapeeji nke kwa nletabelata ibiaghachi ọnụego
Nnukwu ọgụgụ, ekele maka ịkekọrịta ya Douglas!
Ihe na-eme ka saịtị dịkwuo mma ịnọ ogologo bụ eziokwu nke ịmara ihe dị ha mkpa na ịnwe ike ịnye ha ya dị ka o kwere mee. Nke ahụ ga-eme ka ntụgharị dịkwuo elu n'ezie! Nke kachasị mfe ha rutere ebe ahụ, nke kachasị mfe ha na-achọta ihe ha na-achọ na ka ha ga-atụkwasị gị obi n'oge ọzọ!